Ifulethi elingenasici lezinga lengadi - I-Airbnb
Ifulethi elingenasici lezinga lengadi
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Heidi
Leli fulethi eliphansi elinekamelo lokulala elilodwa nelizimele litholakala e-Cleveland phakathi nemizuzu engu- uhamba ngezinyawo ukuya e-Stradbroke Ferry, i-Cleveland RSL kanye ne-Grandview Hotel eyingqophamlando. Iseduze kakhulu namanzi. Le ndawo ivikelekile futhi izakhiwo zihlanganisa indawo yokubhukuda, i-spa, i-sauna, indawo ye-bq esophahleni kanye nendawo yangaphansi kwemoto.
Kungakhathaliseki ukuthi uhlala ngenxa yomsebenzi noma ukuzijabulisa, lokhu nakanjani ukubheka.
Ikhishi elinakho konke lihlanganisa i-ceramic cook-top, uhhavini wensimbi engagqwali kanye ne-microwave. Ikhishi/indawo yokudlela nayo iyakwazi ukungena egcekeni. Kukhona umshini wokuwasha nomshini wokomisa ukuze kube lula kuwe.
Igumbi lokuphumula elivulekile linosofa abantofontofo, i-TV/i-DV kanye nedeski lokufunda.
Ikamelo liqukethe umbhede owodwa omkhulu we-Posturepedic walobo busuku bokuphumula kanye nengubo eyakhiwe ngaphakathi. Ikamelo liphinde livulekele indawo yangasese yangaphansi ye-alfresco.